စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ပညာသင်ပါ « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
Bookmark the permalink.	စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ပညာသင်ပါ
by ချစ်သူအတွက်	တစ်ခါတုန်းက မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာ ကျောက်မျက်ပညာကို
တစ်ဖက်ကမ်းခပ်အောင် တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာကြီးရှိပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ထိုဆရာကြီးဆီကို လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့
ပညာသင်ခွင့်တောင်ခံပါသတဲ့။ ဆရာကြီးက သူငယ်ကလေးကို
ကြည့်ပြီးတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ် ဒီပညာသင်ဖို့ရာ စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်ကွဲ့။ သူငယ်လေးကလည်း လေးလေးနက်နက်ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ပညာသင်ယူဖို့
ကတိပြုပါသတဲ့။ ကောင်းပြီး ဒါဆိုရင်တော့ မနက်ဖြန်လာခဲ့ပါ။
နောက်နေ့မနက် လူငယ်လေး ရောက်လာတော့ ဆရာကြီးက
လူငယ်လေးလက်ထဲကို ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတစ်တုံးထဲ့ပေးပြီးတော့ သူငယ် မင်းဒါလေးကို ကိုင်ထားလို့ပြောပြီး
သူလုပ်စရာရှိတဲ့ ကျောက်ဖြတ်ခြင်း၊ ကျောက်အလေးချိန် ချိန်တွယ်ခြင်း၊ ကျောက်များကို စီခြင်း
စတာတွေကို လုပ်ကိုင်နေပါသတဲ့။ လူငယ်လေးလဲ ငြိမ်သက်စွာနဲ့ပဲ
ထိုင်နေပြီး ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးကလေးကို ကိုင်ထားပါသတဲ့။
နောက်တစ်နေ့ လူငယ်လေးရောက်လာပြန်တော့လဲ ဆရာကြီးက
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးကလေးကို လူငယ်လေးလက်ထဲကို ထည့်ပြီး ကိုင်ထားစေပြန်ပါသတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ တတိယနေ့၊ စတုတ္ထနေ့၊ ပဉ္စမနေ့၊ တွေမှာလည်း
ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုန်းကလေးတွေ ပေးပေးပြီးတော့ ထိုနည်းတူ ကိုင်ထားခိုင်းပါသတဲ့။
ကိုင်ထားရင်းနဲ့ လူငယ်ကလေးက သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ “ဆရာကြီးရယ်၊ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်တော့များ ကျောက်မျက်ပညာသင်ပေးမှာလဲ
ဆရာကြီး” လို့မေးပါတဲ့။ ဆရာကြီးက “မင်း မကြာခင်သင်ရမှာပါ”
လို့ ပြန်ပြောပြီး သူ့အလုပ်ကိုသာ သူဆက်ပြီးလုပ်နေပါသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာသည့်တိုင်အောင်
သူငယ်လေးဟာ မနက်တိုင်း ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးလေးတွေကိုသာ ကိုင်ရင်းနဲ့ ကုန်လွန်လာခဲ့ပါသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ဆရာကြီးဟာ သူငယ်လေးဆီကိုလာပြီးတော့ သူ့ကို
တစ်ခုခုကို ကိုင်ခိုင်းဖို့ လက်ယက်ခေါ်ပါသတဲ့။ သူငယ်လေးဟာ စိတ်မပါတစ်ပါနဲ့ဘဲ ဆရာကြီးဆီကို လာပါသတဲ့။ ဆရာကြီးဟာ ကျောက်အရိုင်းတစ်တုံးကို သူငယ်လေးလက်ထဲကို
ထည့်ပေးလိုက်ပါသတဲ့။ အဲ့ဒီမှာ လူငယ်လေးက “ဆရာကြီး
ဒါက ကျောက်စိမ်းတုံးနဲ့ မတူဘူး”။
ဆရာကြီးက ပြန်ဖြေသတဲ့ “အင်း မင်းပညာသင်နေပြီလေ”
← အကောင်းမြင် စိတ်ကလေး တစ်ခု
ပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေ Cancel reply	Enter your comment here...
ဆိုက်စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။July 29th, 2011လာရောက်လည်ပတ်
ကျေးဇူးတင်ပါသည်ခင်ဗျာ။၂၀၁၂ မှာပျော်ရွှင်ပါစေ	ကိုသူသည်
ဒီလိုကြိုးစာရှာဖွေသူ တယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ	ဆက်သွယ်ရန်	kothu1987.magway@gmail.com
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်	ဆိုက်ထဲဝင်ရန်	Register	Log in
WordPress.com	ချစ်သူ....... ဘ၀ဆိုတဲ့လောကကြီးမှာ “ရက်.လ.နှစ်”တွေ ရွှေ့လျားနေတာနှင့်
အမျှ နင့်ကိုငါသတိရနေခဲ့တာ ဒါ....မုသားမဟုတ်ဘူးနော်....
” စာဖတ်ပါ ” မည်သူမဆို လူသားတစ်ဦးအနေနှင့် မနက်ထက် ညမှာ ပညာပိုရှိရမည်။ မနေ့ကထက် သည်ကနေ့ ပညာပိုရှိရမည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ဦးနှောက်အလေးချိန် ပိုစီးလာရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အကြီးမားဆုံးပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ရာရောက်သည်။ ဒီအတွက် မည်သို့လုပ်မည်နည်း ............. ????? တစ်နည်းသာရှိသည် " စာဖတ်ပါ " ဘလော့စာများ	196,556 အရေအတွက်
မှတ်စုယူရန် RSS - Posts RSS - Comments
ကဗျာ ၁ပုဒ်ရှိတယ်	ကဗျာ ၁ပုဒ်ရှိတယ်
ရေးစပ်ထားတဲ. ကဗျာ ၁ပုဒ်ရှိတယ် ဟိုးမှာတွေ.လား နှလုံးသားက စွန်.ပယ်လိုက်တဲံ. ထွက်သက်ဟူသမျှ အောက်ဆီဂျင်ထက်ပေါ. ပါး တိမ်မှာကပ်ထားတယ် နင်ရင်ဘတ်နဲ. ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါ ကွယ်..။။
"ဘဝတစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဟာ ဘဝနေဝင်ချိန် (သေဆုံးခါနီး)ပဲလို့ လူတိုင်း သိနေပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ ယခု သင်စာဖတ်နေတဲ့ ဖြစ်ဆဲခဏ အချိန်လေးသာ သင့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်..."
"လူ့ဘ၀ တစ်ခုရဲ့ အချိန်ဟာ အလွန်တိုတောင်းလွန်းလှပါတယ်၊ တိုတောင်းလှတဲ့ ဘ၀ကို သာယာမှု၊ စိတ်ဆိုးမှု စတာတွေနဲ့ အချိန်မကုန်သင့်ဘူး၊ လူသားတိုင်း မိမိဘ၀ရဲ့ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ ကုန်လွန်ပါစေ..." အပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ခံရမှာစိုးလို့ ကန်ဇွန်းဥလိုမြေကြီးထဲနေပါတယ်ဆိုမှ လာလာပြီးဆွနေကြတယ်
Feedburner activate လုပ်နည်း	email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Subscribe ကို နှိပ်ပါ
အမြဲရွတ်ဖတ်သော	သမ္ဗုဒ္ဓေ အဌ၀ီသဉ္စ ဒွါဒသဉ္စ သဟသာကေ ပဉ္စသတ သဟသာနိ နမာမိ သိရသာမဟံ အပါယ်ကာ ၀ါဠုကာ ဂဂ်ါ နေန္တာ နိဗ္ဗုတာ ဇိနာ တေသံ ဓမ္မဉ္စ သံဃဉ္စ အာဒရေန နာမာမဟံ နာမက္ကာရာ နုဘာဝေန ဟိတွာ သဗ္ဗေ ဥပဒ္ဒဝေ အနေက အန္တရာ ယာပိ ၀ိနသန္တု အသေသတော....။
transportationအချစ်နှစ်မျိုးရှိတယ်.	အချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်... အရမ်းချစ်နေရက်နဲ့ အဲဒီအချစ်ကို လှပပြည့်စုံအောင် မထုတ်ဖော်ပြတတ်ဘူး။ အချစ်တစ်မျိုးရှိတယ်... လက်လွတ်ရမယ်မှန်းသိနေရက်နဲ့ အဲဒီအချစ်နားက မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်ရတယ်။
ဓတ်ပုံ	More Photos
ယနေ့ လာရောက်ကြသူများ	ဧည့်သည်နိုင်ငံများ	မြန်မာဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ ကျင်းပမည်	ယခုနှစ် ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွက် ချီးမြှင့်မည့် မြန်မာဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီဆုများတွင်
အကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ဆု ( အထွေထွေ )၊
myanmar.exchange.25@gmail.com လေ့လာမှုများUncategorized ကျန်းမာရေး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ရင်းတွင်းစာ ဟာသလေးများ ကောင်မလေး ချစ်သူ
သံဝေဂ	* သင့်အသက်တွေ ကြီးနေပြီ၊
* သင့်သွားတွေ ကျိုးနေပြီ၊
* သင့်အသားတွေ တွန့်နေပြီ၊
* သင့်အင်အားတွေ လျော့ပါးနေပြီ၊
* သင့်ဆံပင်တွေ ဖြူကုန်ပြီ၊
* သင့်မျက်စိတွေ မှုန်ဝါးနေပြီ၊
ငါ့ကို စာပြန်ပါ……….	အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲ
သင်ဝင်ရောက်နေသော နေရာ	Your IP Address is203.81.85.66
Daily Premium Accounts ယူရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ	chat	software	Mozilla Firefox
Fonts Download	Blog at WordPress.com.	%d bloggers like this: